Drafitra famoronana amin'ny famolavolana logo | Famoronana an-tserasera
Fran Marin | | Graphic Design, Inspiration
Rehefa mandinika ny famolavolana sary famantarana isika dia tena zava-dehibe ny fahafantarantsika ny fampiasana ireo loharano mety ary avelao aho hanazava. Ny sary famantarana iray dia tsy mihoatra ny ambany noho ny fanehoana an-tsary ny mombamomba ny orinasa na orinasa na inona na inona toetrany. Izany no antony maha-zava-dehibe ny ianarantsika manangana marika izay mifanaraka amin'ny soatoavina fototra, ny tantara ary ny nahaterahan'ity orinasa ity. Raha vantany vao azontsika ny fampahalalana rehetra avy amin'ny mpanjifanay ary fantatray tsara izay tianay horesahina amin'ny alàlan'ny fiteny hita maso sy ny tena tianay holazaina, tonga ny fotoana hametrahana dingana famoronana izay mitarika antsika amin'ny raikipohy mety indrindra. Raha fintinina dia niditra an-tsokosoko tamin'ny sombin-javatra kely amin'ny asa kely ataontsika izahay ary izao no fotoana tokony hanaovantsika izany omeo feo ny loharanonay.
Afaka manadihady amin'ny fisoratana anarana, tonika ary fikambanana samihafa izahay. Ity dia ho raharaham-pitsapana sy hadisoana amin'ny lafiny iray ka tsy tokony ho kivy ianao rehefa avy nanatanteraka ny dingana famoronana tsy hitanao ny vahaolana tadiavinao. Androany dia te-hijanona amin'ity dingana ity izahay ary te-hanome anao fitaovana iray izay azo antoka fa mahasoa sy manome aingam-panahy amin'ny asanao mpamorona. Ireto ambany ireto dia manangona ny fizotran'ny dingana izay nanatontosana ny mombamomba ny orinasa sy ny sary momba ny tetikasa samihafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Drafitra famoronana amin'ny famolavolana logo: ohatra azo ampiharina tokony ho fantatrao
studio famoronana sary dia hoy izy:
Logos tena tsara, ary nanazava tsara ny fomba hahatongavana amin'izy ireo. Mahafinaritra ny mahita asa tsara toy izany.
Mamaly ny studio famoronana sary
Tiako ny tetezamita, toa tsara tarehy izy ireo.
Marco Antonio Camarena Pascual dia hoy izy:
Tena tiako izy io, manabe ary manentana ny saina.
Valiny tamin'i Marco Antonio Camarena Pascual
lily ortega dia hoy izy:
Mamaly an'i Azucena ortega